Izindaba - Kungani Usilika
Ukugqoka nokulala kusilika kunezinzuzo ezimbalwa ezengeziwe ezizuzisayo emzimbeni nasempilweni yesikhumba sakho. Iningi lalezi zinzuzo livela eqinisweni lokuthi usilika uyintambo yesilwane yemvelo ngakho-ke uqukethe ama-amino acid abalulekile umzimba womuntu awadingayo ngezinhloso ezahlukahlukene njengokulungiswa kwesikhumba nokuvuselelwa kwezinwele. Njengoba usilika wenziwa yizikelemu zikasilika ukuze ubavikele ekulimaleni kwangaphandle ngesikhathi sesigaba sabo sikakhukhunathi, futhi unamandla emvelo okukhipha izinto ezingafuneki ezinjengebhaktheriya, isikhunta nezinye izinambuzane, okwenza ngokwemvelo kube ne-hypo-allergenic.
Ukunakekelwa kwesikhumba nokukhuthaza ukulala
Usilika kamalibhele omsulwa uqukethe amaprotheni ezilwane aqukethe ama-amino acid ayi-18 abalulekile, aziwa ngokusebenza kwawo kahle ekondleni kwesikhumba nasekuvikeleni ukuguga. Okubaluleke kakhulu, i-amino acid iyakwazi ukukhipha into ekhethekile yemolekyuli eyenza abantu babe nokuthula nokuzola, okukhuthaza ukulala ubusuku bonke.
Ukumunca umswakama nokuphefumula
I-silk-fibroin e-silkworm iyakwazi ukumunca nokuhambisa umjuluko noma umswakama, ikugcine upholile ehlobo futhi ufudumele ebusika, ikakhulukazi kulabo abaphethwe i-allergenic, eczema nalabo abahlala embhedeni isikhathi eside. Yingakho odokotela besikhumba nodokotela behlala bencoma ukulala kukasilika ezigulini zabo.
Anti-bacterial futhi Ngokumangalisayo Soft futhi Smooth
Ngokungafani nezinye izindwangu zamakhemikhali, usilika uyintambo engokwemvelo kakhulu ekhishwe kumbungu kasilika, futhi ama-weave aqine kakhulu kunamanye izindwangu. I-sericin equkethwe kusilika ivimbela ukuhlaselwa yizibungu nothuli kahle. Ngaphezu kwalokho, usilika unesakhiwo esifanayo sesikhumba somuntu, okwenza umkhiqizo kasilika uthambe ngokumangazayo futhi ungahambisani nhlobo.